Ny tsara, ny lehibe ary ny mampatahotra amin'ny faharanitan-tsaina artifisialy | Martech Zone
Ny tsara, ny lehibe ary ny mampatahotra amin'ny faharanitan-tsaina
Alakamisy, May 11, 2017 Alakamisy, May 11, 2017 Douglas Karr
Rehefa navotsotra tamim-boninahitra tao amin'ny Tafika an-dranomasina aho tamin'ny 1992, dia tonga lafatra ilay izy. Nandeha niasa ho an'ny Virginian-Pilot any Norfolk, Virginia aho - orinasa iray izay nandray tanteraka ny IT Innovation ho isan'ny tetikady ifotony. Nametraka fibre izahay ary nesorinay ny zanabolana an-tserasera, izahay mpanara-maso lozisialy azo ampitaina amin'ny PC ary naka angon-drakitra izay nanampy anay hanatsara ny fikojakojana amin'ny alàlan'ny Intranet iray, ary ny orin'asa, Landmark Communication, dia efa nanambola be tao fahazoana gazety an-tserasera. Fantatro fa zavatra manova fiainana ahy ny Internet.
Ary roa taona monja talohan'izay, Sir Tim Berners-Lee nanamboatra ny fitaovana ilaina rehetra amin'ny Internet miasa, ao anatin'izany HyperText Transfer Protocol (HTTP), Fitenenana Marka HyperText (HTML), ny tranonkala voalohany, ny voalohany Rindrambaiko mpizara HTTP, ny mpizara tranonkala voalohany, ary ny pejy Web voalohany izay mamaritra ny tetikasa mihitsy. Ny orinasako sy ny asako dia nanomboka ara-bakiteny avokoa noho ny fanavaozana nataony, ary tiako foana ny hahita azy miteny mivantana.
25 taona aty aoriana ary fanovana IT
Mark Schaefer nanasa ahy hiaraka aminy Luminaries - miresaka amin'ny saina mamiratra indrindra amin'ny teknolojia, podcast an'i Dell izay manome fahitana lehibe momba ireo mpitarika ao ambadiky ny orinasa manavao indrindra an'izao tontolo izao. Na dia fantatro aza i Dell ho toy ny orinasa iray izay mivarotra solosaina finday sy solosaina finday ho an'ny mpanjifa sy mpizara amin'ny orinasa - tsy mbola nahita ny tontolo iainan'ny Dell Technologies amin'ny ankapobeny aho raha tsy tamin'ity fotoana ity. Fitsangatsanganana mahafinaritra io - na avy amin'ny fiaraha-miasa amin'i Mark izay hajaiko indrindra - ary ny fahazoana hevi-baovao amin'ny ho avy rehefa manadihady ny fitarihan'i Dell.
Bebe kokoa momba izany avy eo!
Anisan'ny fandaharana izahay ary nasaina hanatrika Dell EMC World any Las Vegas (toerana anoratako izany ao amin'ny birao fandraisam-bahiniko). Hitanay, fotoana fohy taorian'izay, fa hiteny i Berners-Lee Fahaizana artifisialy. "Giddy" no teny tokana mety ampiasaina hilazana ny hafaliako. Heveriko fa i Mark dia nilaza tamiko aza nitony tamin'ny fotoana iray. 🙂 Aza hadino ny mijery Ny hevitr'i Marka amin'ity kabary ity koa!
Sir Tim Berners-Lee momba ny faharanitan-tsaina
Ny andalana ho an'ny lahateny dia nanodidina ny antsasaky ny Sands Expo ary feno fankasitrahana aho noho i Mark nitazona toerana iray nilahatra rehefa nanangona haingana ireo fitaovana tamin'ny rakitsoratray farany izahay. Nipetraka izahay, ary notapahin'i Mark ny sariko etsy ambony… woohoo! Minitra vitsy taorian'izay dia tonga teo amin'ny lampihazo Sir Tim ary nanomboka ny fifanakalozan-kevitra. Nizara ny fitiavany an'i Isaac Asimov sy i Arther C. Clarke tany am-boalohany izy, mpanoratra roa izay nampahafantaran'ny raiko ahy ahy fony aho mbola tanora (miaraka amin'ny Star Trek, mazava ho azy!). Tamin'ny 16 taona zokiko dia mbola nahafaly ihany ny nieritreritra ny fitovizan'ny fiainantsika - na dia fantatro aza fa tsy ho Knight aho. Eny, toy ny hoe io ihany no tsy nitovizany.
Berners-Lee dia nampahafantatra ny olon-drehetra fa tsy manam-pahaizana AI izy, saingy nanana eritreritra kely momba ny tombontsoa sy ny tahotra any izy. Ny fanovana izay ho avy any AI dia saika tsy azo ihodivirana intsony amin'izao fotoana izao, fa tsy misy miady hevitra momba ny mety na ny tombony tsy manam-petra ho an'ny olombelona.
As DellEMC mandroso ny haitao misy azy manokana, ohatra, ny fampifangaroana be loatra miaraka amin'i AI dia efa eo an-tokonam-baravarana - ireo rafitra izay mampitombo ny computing, ny fitehirizana ary ny tambajotra an-tsaina arak'izay ilain'ny orinasa azy ireo. Ny fihenan'ny fampidirana marobe, ny rafitra tsy mitovy ary ny hadisoan'ny olombelona dia hanampy betsaka hatrany ireo orinasa hahatratra mandroso haingana, fe-potoana heno imbetsaka tao amin'ilay hetsika.
Berners-Lee dia niresaka momba ny fandrosoana eo amin'ny fiaraha-monina izay azo tratrarina izay hanampy amin'ny fampihenana ny fako, hampitombo ny fahombiazana ary ny fanatsarana ny fiaraha-monina amin'ny ankapobeny.
Eritrereto fotsiny izany amin'ny fomba fijerin'ny orinasa, ny fananana rafitra ara-bola afaka maminavina, manome fahazoan-dàlana, na manitsy mihitsy aza arakaraka ny fahasalamanao ara-bola. Na rafi-pitantanana maha-olombelona izay mamorona rafi-pamporisihana natao manokana ho an'ny anjaran'ny mpiasa. Na ny rafitra fambolena izay manatsara ny fampiasana pestisides na rano amin'ny dinamika nefa tsy mila mampandre ny tantsaha. Na ireo orinasa teknolojia afaka mandanjalanja sy manatsara ny fotodrafitrasa ary koa ny traikefan'ny mpampiasa nefa tsy mila mamolavola drafitry ny vokatra, vondrona mifantoka na fitsapana.
Na, mazava ho azy, ny fivarotana faharanitan-tsaina artifisialy izay mampiavaka ny fiteny, ny fanolorana, ny mpanelanelana ary ny fantsona hahafahana manavaka sy manintona ny fanantenana! Oay!
Ary ahoana ny momba an'i Skynet sy ny mpitovo?
The singularity dia ny fiheverana fa ny famoronana superintelligence artifisialy dia hiteraka tampoka ny fitomboan'ny haitao, izay miteraka fiovana tsy takatry ny saina amin'ny sivilizasiôna olombelona.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, inona no mitranga rehefa mamorona rafitra mihoatra ny fahafahantsika mahatakatra azy ireo ny rafitra? Matetika ny tantara foronina momba ny siansa dia namaritra an'io toy ny Terminator, izay mamaritra ny teknolojia fa tsy ilaina ny olombelona ary manimba antsika. Ny fahitan'i Berners-Lee dia tsy mahery setra nefa mbola miteraka ahiahy be ihany. Ny iray amin'ireo olana noresahiny dia ny tsy fananan'ny robot na tsia zo. Ary ny mpitondra amin'ny asa aman-draharaha sy ny governemanta dia tsy maintsy manangana fanaraha-maso sarotra kokoa ankoatr'izay Ny lalàna telo nataon'i Isaac Asimov.
Andao hapetraka ny fitaovam-piadiana robotic marani-tsaina izay efa mandika ny fitsipika # 1. Ny olana, araka ny nofaritan'i Berners-Lee dia tsy ny robot no tena olana - fahaizana artifisialy izany. Companies dia teknolojia ary hampihatra AI avokoa izy ireo hanampy amin'ny lafiny rehetra amin'ny orinasany. Mizara matetika an'i Domino's Pizza i Mark matetika ohatra. Orinasa pizza misy teknolojia ve izy ireo? Sa a orinasa teknolojia namboarina hanatitra pizza? Tena ity farany ity androany.
Ary ny olana? Companies do manan-jo; noho izany, ny haitaon'izy ireo manana zo voajanahary. Ary amin'ny alàlan'ny proxy, ny zana-tsokajy novokarin'io orinasa io dia hanana zo. Fampandrenesana tena mila resahina izany satria ny faharanitan-tsaina artifisialy dia manafaingana ny lazany sy ny fampiasana azy. Alao an-tsaina ny orinasa lehibe iray, ohatra, izay manana sehatra mampiasa ny faharanitan-tsaina artifisialy hamoronana zavatra mahasoa ho an'ny tompon-trosa - saingy manimba ny zanak'olombelona izany. Tsy ireo robot no tokony hanahirana antsika fa ny faharanitan-tsaina artifisialy izay tsy misy fanaraha-maso hiantohana ny fiarovana antsika sy ny filaminantsika.
Berners-Lee dia mieritreritra fa ny zava-tokana dia mety ho zava-misy ao anatin'ny 50 taona. Nanambara mazava tsara ihany koa izy fa azy misaina hevitra fa hihoatra ny fahaizan'olombelona ny AI. Miaina amin'ny fotoana mahavariana isika! Tsy mino aho fa natahotra i Berners-Lee na natahotra an'io ho avy io - nilaza fotsiny izy fa ny orinasa, governemanta, ary na dia ireo mpahay tantara foronina momba ny siansa aza dia mila miresaka bebe kokoa momba ireo olana ireo raha manantena ny hiantoka ny ho avintsika isika.
Fampahafantarana: Nandoa ny fandaniako rehetra Dell hanatrehana ny Dell EMC World ary mpanjifako ho an'ny fanazavana podcast ity. Aza hadino ny mandanjalanja sy mijery anay, tena tadiavinao ny valinteninao!
Tags: aiBerners-LeeconvergenceDelldell emcdell emc izao tontolo izaoHyper-convergencelas vegasfanazavanaMark Schaefertim berners-lee